नायीका स्वस्तिमा भन्छिन् बिहेको भोलिपल्टै श्रीमानसँग एउटै कोठामा जान दिइएन, अझै याद छ त्यो पल ! – Hamro Nepali Samachar
Home/ मनोरंजन/नायीका स्वस्तिमा भन्छिन् बिहेको भोलिपल्टै श्रीमानसँग एउटै कोठामा जान दिइएन, अझै याद छ त्यो पल !
काठमाडौं । अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले महिनावारी भएको बेलामा आफुले भोगेको कुरालाई एउटा अ’न्तवार्ताका क्रममा ब्याख्या गरेकी छन् । उनले विवाह पछि म’हिनावारी हुँदा आफ्नो श्रीमानको कोठामा जान नदिइएको कुरालाई पनि सा’र्वजनिक गरेकी छन् ।
विवाह भएको भोलीपल्दै म’हिनावारी भएको बताएकी उनले त्यतीबेला आफुलाई श्रीमानको कोठामा जान नदिइएको बताएकी हुन् । पहिलो म’हिनावारी बार्न सात दिन आफ्नो मामाघर गएर बसिन्।
अभिनेता राजेश हमालले पहिलोपटक गायको गीत सार्वजनिक, आवाज रहेछ यति मिठो (भिडियो सहित)
कंगनाको ‘थलाइवी’ सिनेमाको लागी शर्त
गायिका नेहा जुन ठाउँमा एउटा कोठा भाडमा बस्थिन् आज त्यहाँ आफ्नै आलीशान बंगला बनाइन्